Nin 49 sano oo ay is qabeen xaaskiisa u xisaabiyey maalinkii 1 doolar – SBC
Nin 49 sano oo ay is qabeen xaaskiisa u xisaabiyey maalinkii 1 doolar
Posted by editor on April 19, 2011 Comments
Nin u dhashay wadanka Mareykanka oo lagu magacaabo Arthur Schumacher ayaa saxaafada aduunka soo jiitey ka dib markii uu sameeyey dhacdo soo jiidasho leh oo an in uu subax kasta oo waabaryo oo ay is qabeen uu xaaskiisa u xisaabiyey 1 doolar.
Telefishinka Mareykanka laga leeyahay ee lagu magacaabo ABC ayaa baahiyey in Arthur Schumacher oo degan deegaanka Raleig ee North Carolina uu go’aansadey in maalin kasta oo ay xaaskiisa is qabeen uu siinayo 1 doolar.
Arthur Schumacher wuxuu go’aansadey in subax subaxyada ka mid ah uu soo ururiyo lacago isagoo maalintii oo dhan socdey isla markaana jarey ku dhawaad 100 KM si sadex Bangi uu lacag uga soo qaado lacagtaasi oo waliba ah aheyd hal hal doolar, waxaana xaaskiisa Jeanette godoonsiiyey $ 17,885 (Todoba & Toban kun sideed boqol sideedan & shan) doolarka Mareykanka taasi oo ah in mudadii 49-ka sano ee ay is qabeen xaaskiisa uu u xisaabiyey hal doolar.
Maalintaasi uu lacagta soo ururinayey waxaa gaariga u wadey gabadhiisa dhawr jeer oo ay soo wacdey xaaskiisa wuxuu u sheegay in uu guriga ku soo laaban doono goor dhaw, isagoon u sheegin Jeannette lacagta uu soo ururinayo, ilaa uu iyadoo fadhida dhawr xirmo oo lacag uu u keenay.
Lamaanahan oo todobaadkan u dabaaldegaya sanadguurada 49 ee guurkooda, iyadoo markii ugu horeysay ee ay kulmaan ay aheyd bishii December sanadkii 1958-dii, balse waxay is guursadeen 4 sano ka dib oo aheyd sanadkii 1962-dii, xiligaasi oo Arthur Schumacher uu qaatey fasax 30 maalmood ah oo ka qaatey ciidamada Mareykanka oo uu ka tirsanaa.Arthur Schumacher wuxuu ka sheekeeyey markii ugu horeysay ee uu arko xaaskiisa Jeanette waxaana uu yiri “Markii ugu horeysay ee aan arko , waxaan is tusay inay tahay quruxley, oo waliba tahay qof aad u qatar ah”.
Laakiin Arthur Schumacher waxaa lagu yeeshay lacag 12 doolar gaaraysa taasi oo ku timid qaladka xaga xisaabta ah oo ku aadan maalmaha farqiga ah ee sanadaha ku jira waxaana uu sheegay in uu taasi ilaaway oo uu xaaskisia Jeanette lacagtaasi siinayo.
adduunyada gaalada waalasiiyay